Ambatofinandrahana : Dahalo miisa 15 lavon’ny zandary -
AccueilSongandinaAmbatofinandrahana : Dahalo miisa 15 lavon’ny zandary
Tsy ahitam-pitsaharany ny resaka fanafihan-dahalo any amin’iny faritr’Amoron’i Mania iny, ary isan’ny lasibatra matetika amin’izany ny distrikan’Ambatofinandrahana. Dahalo miisa 15 indray mantsy no lavon’ny zandary sy ny fokonolona tany an-toerana taorian’ny fanarahan-dia sy ny fifandonana mahery vaika intelo miantoana. Araka ny nambaran’ny teo anivon’ny zandarimariam-pirenena, dia tonga nanafika tanàna iray tao amin’ny fokontany Ambalavato Andrefana, kaominina Amborompotsy, ao amin’io distrika voalaza io ny malaso manodidina ny 60 mahery nitondra basy kalaky, Mass36 ary basim-borona, afakomaly tokony ho tamin’ny 09 ora maraina. Ankoatra ny fampihorohoroana ny mponina, dia noraofin’izy ireo tamin’izany ny omby miisa 250 an’olona maromaro nitangorona teo an-tanàna, niaraka tamin’ny takalon’aina miisa telo.
Nampandre ny teo anivon’ity vondron-kery ity avy hatrany moa ireo niharan-doza vantany vao dify ireo dahalo, ka niroso avy hatrany tamin’ny fanarahan-dia ny roa tonta. Antsasak’adiny taorian’ny halatra, dia raikitra ny fifandonana voalohany teo amin’ny toerana iray tao amin’io kaomina Amborompotsy io ihany. Nitohy tany amin’ny fokontany Andranovory indray izany avy eo tamin’ny 11 ora sy fahatelony, ary nifarana tao Ambodiala, fokontany Amborompotsy, tokony ho tamin’ny 01 ora tolakandro. Vokatr’izay fifanandrinana intelo nifanesy izay, dia dahalo miisa 15 no indray lavon’ny zandary miisa folo, sy ireo mpanara-dia. Olona iray tamin’ireo fokonolona ihany koa no voatifitr’ireo olon-dratsy, ka nentina novonjena avy hatrany tany amin’ny CSBII ao Amborompotsy. Marihina fa avotra soa aman-tsara teny am-pelatanan’ireo malaso ireo takalon’aina miisa telo, ary tafaverina amin’ny tompony avokoa ireo omby very.
Nisesisesy ny fandavoana
Raha tsiahivina, dia vao tamin’ny 29 mey lasa teo ihany koa no nisy dahalo miisa 13 lavon’ny kalony tany amin’ny kaominina Karianga, distrikan’i Vondrozo, faritra Atsimo Atsinanana. Raha atambatra izany ny isan’ireo olon-dratsy mpangalatr’omby maty tao anatin’izay roa andro izay, dia nahatratra 28. Satria tsy mitsitsy ary tsy menatra mandatsaka aina ireo malaso rehefa hanatanteraka ny asa ratsiny, dia miray hina sy mifarimbona miaraka amin’ireo mpitandro filaminana ihany koa ireo mponina hamaliana azy ireo. Isan’ny tena hanararaotan’ireo olon-dratsy mantsy ny fahavitsian’ireo zandary miasa amin’ireo faritra mafana amin’ity resaka halatr’omby ity, saingy efa misy ihany koa ny vondron’olona na fikambanana miady amin’ity asa ratsy ity ka efa manomboka mifandanja ny hery, porofo azo tsapain-tanana ny nahazoana izao vokatra izao . Mbola mitohy moa ny fikarohana hataon’ny eo anivon’ny borigadin’Amborompotsy ireo dahalo ambiny miaraka amin’ireo basy mahery vaika nampiasain’ireo olon-dratsy, izay marihina fa notsimponin’ireo namany tamin’ny fotoana nahavoatifitra azy 15 ireo.
christmas xray markers dans Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet
Manoloana ny fitaintainan’ny mponina manoloana ny fitrangan’ny aretina pesta, dia nanamafy omaly ny praiminisitra lehiben’ ny governemanta fa efa voafehy izao ny pesta “Ny ilazana azy hoe voafehy dia fantatra ny toerana misy ilay aretina ...Tohiny
Business & Finance: Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of…